वृद्धाश्रममा भेट भएका नातिनी-हजुरआमाको मन छुने तस्बिरको कथा, जुन सुनेपछि नरुने कोहि हुँदैन – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > वृद्धाश्रममा भेट भएका नातिनी-हजुरआमाको मन छुने तस्बिरको कथा, जुन सुनेपछि नरुने कोहि हुँदैन
एजेन्सी । भनिन्छ एउटा तस्बिरले हजार भन्दा धेरै शब्द बोल्ने क्षमता राख्छ । यस्तै एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।यो मर्मस्पर्शी तस्बिर यति धेरै सेयर भएको छ कि सामाजियक सञ्जलामा पुरै भाइरल छ । केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा नेपालका सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको यो तस्बिरमा एक बालिका र वृद्धा रोइरहेका देखिन्छ ।
तस्बिरको सत्य के हो ? तस्बिरसँगै लेखिएको कुरा वास्तवमै सत्य हो त ? यसकाे जवाफ भारतका एकजना वरिष्ठ फोटो पत्रकार कल्पित भचेचले बीबीसीलाई बताएका छन् ।खासमा यो तस्बिर कल्पितले ११ वर्षअघि सन् २००७ मा खिचेका थिए । स्वयम् कल्पितले यस तस्बिर र यसको पछाडिको घटनाबारेमा बीबीसीलाई बताएका छन् ।
मैले त्यति भनेपछि विद्यार्थी उभिएका मात्र के थिए त्यही बेला एक बालिका वृद्ध महिलालाई देखेर क्वाँ क्वाँ रुन थालिन् । अर्को अचम्त त के थियो भने बालिकालाई देखेर ती वृद्धा पनि उसै गरेर क्वाँ क्वाँ रुन थालिन् । त्यही बेला बालिकाले दौडेर वृद्ध महिलालाई अंगालो हालिन् । यो दृश्य देखेर त्यहाँ उपस्थित कयौँ मान्छे पनि चकित परे ।मैले त्यही बेलाको तस्बिर धमाधम क्यामेरामा कैद गरेँ ।
त्यसपछि मैले तत्कालै गएर रोइरहेकी वृद्धालाई सोधेँ, ‘तपाईँ किन रुनु भयो ?, उनले भनिन्, ‘हामी दुई हजुरआमा-नातिनी हौँ ।’बालिकाले पनि रुँदै ती वृद्धा आफ्नी ‘बा’ हजुरआमा भएको बताइन् । गुजरातीमा हजुरआमालाई बा भनेर बोलाइन्छ । बालिकाले त्यही क्रममा हजुरआमाबिना आफ्नो जिन्दगी धेरै शून्य भएको बताइन् ।
त्यही बेलादेखि यो फोटोबारेमा गुजरातमा चर्चा सुरु भएको थियो । यस तस्बिरले कयौँ मानिसको मनमा भुइँचालो ल्याउन सफल भएको छ।मेरो ३० वर्षको करिअरमा पहिलो पटक फोटो छापिएपछि मलाई मानिसहरुले हजारौँ फोन गरे । त्यो बेलामा पुरै राज्यमा यस तस्बिरको चर्चा भएको थियो । तर जब म दोस्रो दिन अन्य पत्रकारसहित उनको अन्तर्वार्ता लिन पुगेँ, तब उनले मलाई आफू आफ्नो राजीखुसीले घर छाडेर वृद्धाश्रम आएको जवाफ दिइन् । बीबीसी हामीले अन्नपूर्ण पोस्ट बाट